तिमी म संग खुसी छैनौं भने ठिकै छ तर अन्तिम पटक भेट्न आउ, छोरीले बाबा खोजीरहेकी छ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
May 5, 2021 AdminLeaveaComment on तिमी म संग खुसी छैनौं भने ठिकै छ तर अन्तिम पटक भेट्न आउ, छोरीले बाबा खोजीरहेकी छ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
यति लामो समय देखि श्रीमान हराएपछि श्रीमती रुँदै मिडियामा आएकी छन् । उनको सानो छोरी छन् । विवाह भएको ६ वर्ष भयो । प्रेम विवाह गरेका उनलाई श्रीमानले किन यस्तो ब्यवहार गरे भन्ने जान्न पाएकी छैनन् । थप हेर्नुहोस् भिडियोमा: